Imaanshiyaha Reina oo la sheegayo inay Donnarumma ku xiirayso dhanka PSG – Gool FM
(Milano) 10 Maarso 2018 – Jeer ay AC Milan xaqiijinayso in ay soo qaadanayso goolwalaha Napoli ee Pepe Reina, ayuu Corriere dello Sportku doodayaa in Gianluigi Donnarumma ay taasi ku riixayso dhanka PSG.
Reina ayaa la filayaa inuu xagaaga soo aaddan kusoo biiri doono kooxda Milan, iyadoo uu agaasimaha isboortiga ee Massimiliano Mirabelli uu Mediaset Premium u sheegay inay Napoli ku wargeliyeen inay la hadlayaan wakiilka laacibka.
Waloow horay loo sheegay in Reina oo San Siro yimaadaa aysan ka dhignayn Donnarumma oo ka taga Milan, misna Corriere dello Sport, ayaa sheegaya in Reina oo loo bandhigay €3m oo euro fasalkiiba muddo 3 sano ah aysan u ekayn laacib kayd ku jiri doona.
Donnarumma ayuu sidaa darteed sheegayaa inuu u socdo Paris Saint-Germain, gaar ahaan waxaa arrinta sii xoojin kara haddii PSG ay qaadato Antonio Conte oo u bedeli kara Unai Emery.
MALAGA VS BARCELONA: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!